Global Voices teny Malagasy » “Tsy voasolontena ireo tafavoaka velona, tahaka izany koa ireo niharam-boina tsy mivantana tamin’ny fandripaham-behivavy” · Global Voices teny Malagasy » Print
“Tsy voasolontena ireo tafavoaka velona, tahaka izany koa ireo niharam-boina tsy mivantana tamin'ny fandripaham-behivavy”
Voadika ny 06 Jona 2018 4:53 GMT 1	 · Mpanoratra Daría Castro Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Ny Tetikasa Reframed Stories dia mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao miresaka ny vondrom-piarahamonina misy azy. Ireny tantara ireny dia eritreritry ny olona izay matetika isoloan'ny hafa tena any amin'ny fampitam-baovao. Noforonina ny zavon-teny amin'ny fampiasana ny sehatra Media Cloud, fitaovana fanadihadiana tahiry izay manadihady ny angona media amin'ny fotoana iray manokana, ahafahan'ny mpandray anjara mandinika sy mifanakalo hevitra amin'ny savaranonandon'ny fijery amin'izay anehoana azy ireo ao amin'ny fampitam-baovao. Mitandrina tsara ny tetikasa mba tsy hanao fehinkevitra maimaika momba ny lahatahiry, fa io no fiaingana miteraka sehatra hifanakalozan-kevitra amin'izay azon-dry zareo atao hamolavolana ny fampitam-baovaon-dry zareo manokana amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Mpikatroka i Darío Castro, izay nanampy tamin'ny fananganana ny Ivon-toerana ho an'ny Miralenta sy ny Zo  (INIGED) ao amin'ny Oniversite Foibe ao Ekoadaoro . Ity manaraka ity dia dika antsoratra tamin'ny lahatsary fanadihadian'i Darío amin'ny zavon-tenin'ny voambolana “feminicidio” (fandripaham-behivavy).
Ireo teny manjaka tamin'ny lahatsoratra nivoaka teo anelanelan'ny Janoary 2017 sy Avrily 2018 manonona ny “feminicidio” (lahatsoratra 141) tao amin'ny angona Media Cloud 2 amin'ny seha-mpampitam-baovao miteny espaniola ao Ekoadaoro. (raha hijery sary lehibe kokoa )
Inona amin'ny zavon-teny no nahasarika ny sainao indrindra?
Liana amin'ny fankatoavana ny fomba hisehoanay amin'ny maha niharam-boina tamin'ny herisetra izahay, vatana fotsiny izahay izay novonoina, ary feo nampanginina izahay. Sahiran-tsaina izahay fa tamin'ny fanadihadiana ny zavon-teny, matetika izahay lazaina fa nanjavona na maty. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy izany satria tsy namono anay fotsiny tamin'ny tena hetsika fandripahana vehivavy ry zareo.
Araka ny zavon-teny, ahoana no hisehoan'ny “fandripahana vehivavy” ao amin'ny media?
Gaga izahay fa mazava tanteraka ny fampahalam-baovao fa ny herisetra no fanehoana faratampony amin'ny fanjakazakan-dehilahy eo amin'ny [fiarahamonina] ary nolazaina tamin'ny voambolana ara-pitsarana izay zavatra iainanay, saingy nahagaga ahy ihany koa [tsy niseho tamin'ny zavon-teny]: ny anaran'ireo niharam-boina, ny filazana fa misy ireo tafavoaka velona, ary tsy hita tao amin'ny [zavon-teny] ihany koa ny [fizotran'ny] ny fandripaham-behivavy, ary mampanahy anay izany. Mitarika anay hihevitra fa tsy voasolo tena ny mpiantsehatra voalohany sy ny tena tompon'andraikitra. Tsy aseho ao amin'ny fiainan'ny vehivavy ny fifaharan'ny feminista eo amin'ny sehatry ny tena fiainana.
Ahoana no tokony hisehoan'ny famonoana vehivavy ao amin'ny haino aman-jery?
Mihevitra izahay fa ny fiarahana mandray andraikitra manoloana ny famonoana vehivavy dia tokony haseho, ary mihevitra izahay fa misy ny halavirana lehibe satria tsy milaza izay meloka tamin'ny [famonoana vehivavy] ny [fampahalalam-baovao]. Tsy hita ny fanjakana sy ny tena anaran'ireo izay monina miaraka aminay ary nanapa-kevitra hanatontosa famonoana vehivavy. Mahatsapa ihany koa izahay fa tsy voasolo tena ireo niharam-boina, sy ireo niharam-boina ankolaka tamin'ny famonoana vehivavy. Ny hitan'ny ny fampahalalam-baovao aminay fotsiny dia fonon'ny nofo, rà, sy amin'ny maha-niharam-boina tamin'ny herisetra izay tsy manome fifaharana hanohitra ny famonoana vehivavy.
Ao anatin'ny andiany Rising Frames narafitra tamin'ny fiarahamiasa akaiky tamin'ny fikambanana El Churo  ao Quito, Ekoadaoro ity. Nikarakara atrikasa natao tamin'ny 21 Avrily 2018 izy ireo izay nampitambatra ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba hanadihady ny fomba isehoan-dry zareo na ny lohahevitra tandrovin-dry zareo ao amin'ny angona media Ekoadaoreana ary hamorona tantara ho setrin'izany fisehoana izany.
Mónica Bonilla sy Belén Febres-Cordero no niara-nanatontosa ny fanamarinana ny fandikan-teny, izay nasiam-panovana mba hazava kokoa sy ho fohy kokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/06/120527/
 Tetikasa Reframed Stories : https://rising.globalvoices.org/reframed-stories/
 Media Cloud, : https://mediacloud.org/
 Ivon-toerana ho an'ny Miralenta sy ny Zo: https://www.facebook.com/pg/InstitutoINIGED/about/
 Oniversite Foibe ao Ekoadaoro: http://www.uce.edu.ec/
 raha hijery sary lehibe kokoa: https://rising.globalvoices.org/files/2018/06/sarayakunube.png